Hofic အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကို tubular မော်တာ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အစာရှောင်ခြင်းပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထားမော်တော်,ဂျာမဏီချုပ်မော်တော်,အစာရှောင်ခြင်း Shutter Built-in မော်တော်
Home > ထုတ်ကုန်များ > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း > မော်တော်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် > Hofic အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကို tubular မော်တာ
Hofic အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကို tubular မော်တာ
တံခါးကိုမော်တာကိုလှိမ့်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ဂိုဒေါင်, garaage, ရုပ်ရှင်ရုံ, အပင်များနှင့်အခြားအဆောက်အဦးများအတွက်သင့်တော်ဖြစ်ကြသည်မော်တာဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲကိုလှိမ့်များအတွက်လျှပ်စစ်နှင့်လက်စွဲစာအုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဲဒီမှာတည်ရှိပါကခေတ်သစ်ဗိသုကာနှင့်ထိရောက်မှုလူမျိုး၏အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခုစံပြဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ရဲ့ pursing နေကြသည်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်သုံးအဆင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာများနှင့်ပူးတွဲ disc ကိုအမျိုးအစား DC ကလျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်: ဒါဟာအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါမော်တာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖွဲ့စည်းပုံ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဘရိတ်မရှိသည့်ရဟတ်၏ axial လှုပ်ရှားမှုချိန်ညှိဘရိတ် torque နှင့်အလိုအလျောက်ဘရိတ်လေကြောင်းကွာဟမှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အပေါ်ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးလျော်ကြေး။ အဆိုပါမော်တာအစာရှောင်ဘရိတ်, တိကျ positioning ကိုများနှင့်အပြန်အလှန်လည်ပတ်လိုအပ်စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သည်။
1, AC အ (လက်ရှိပြောင်း) 220 / AC380 တစ်လောကလုံး
2, ခိုင်ခံ့သောဘရိတ် torque
4, အမြင့်အကြိမ်ရေစတင်ရပ်တန့်, ထိရောက်စစ်ဆင်ရေး
5, Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝ
hofic servo motor ကို၏မျိုးဆက်သစ်တံခါးကို switch ကိုအတွက် variable ကို-အကြိမ်ရေ Open-loop ကိုထိန်းချုပ်မှုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအမှားနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်အမှားရှောင်ရှား, အနေအထား, အမြန်နှုန်းနှင့်လိမ်အားအပြည့်အဝ-တံခါးပိတ် servo ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်မ အချိန်ကြာမြင့်စွာ run ။ ဘက်ပေါင်းစုံပေါင်းစည်းဒီဇိုင်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ EMI / EMC လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်တဲ့ဒီဇိုင်း။ အဆိုပါဝါယာကြိုးများနှင့် plug ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှားရှောင်ရှား, မူရင်း PLC + အင်ဗာတာ + အန်ကုဒ်၏ရှုပ်ထွေးသောဝါယာကြိုးထဲမှာလက်ရှိလျှပ်စစ်သံလိုက််ရောက်စွက်ဖက်တိုးတက်စေပါ။ ဘက်ပေါင်းစုံပေါင်းစည်းဒီဇိုင်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ EMI / EMC လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်တဲ့ဒီဇိုင်း။ အဆိုပါဝါယာကြိုးများနှင့် plug ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှားရှောင်ရှား, မူရင်း PLC + အင်ဗာတာ + အန်ကုဒ်၏ရှုပ်ထွေးသောဝါယာကြိုးထဲမှာလက်ရှိလျှပ်စစ်သံလိုက််ရောက်စွက်ဖက်တိုးတက်စေပါ။
servo motor ကိုများအတွက်မေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:
Q1 ။ စက်ရုံထဲမှာဘယ်နှစ်ယောက်လုပ်သားများရှိပါသလဲ
Q2 ။ လစဉ်စွမ်းရည်ကဘာလဲ?
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တစ်လလျှင် 100 ကိုအစုံပါပဲ။
Q3 ။ ပစ္စည်းအရည်အသွေးစံကဘာလဲ?
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံခါးကို iso9001 ce, SGS, လွန်သွားနိုင်ပါတယ်။
Q4 ။ အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုအရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်ရနိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်အရွယ်အစားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Q5 ။ ငါအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းနမူနာများကိုနိုင်သလား?
Q6 ။ တစ်ဦးချင်းစီအမိန့်များနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကဘာလဲ?
ဖြေအများအားဖြင့် 1 set ကို, သင်မူကားတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုလက်ခံနိုင်လျှင်, ငါတို့သည်လည်းသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုထောက်ခံပါတယ်။
တစ်ဦးက: သင်ယခင်ကရှိအမိန့်များ၏အရေအတွက်ပေါ် မူတည်. အများအားဖြင့်7ရက်အတွင်း။
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းကရက်ဒစ်၏ T / T နှင့်မျက်မှောက်စာတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Q9 ။ သင်ဘယ်လိုအရည်အသွေးကိုအာမခံသလဲ?
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်နှစ်အာမခံနေကြသည်။ ဒီကာလအတွင်းမဆိုအရည်အသွေးမြင့်ပြဿနာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်တန်း၏, ထိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှုနှုန်းထက်လျော့နည်း 1% ဖြစ်ပါသည်။
အစာရှောင်ခြင်းပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထားမော်တော် ဂျာမဏီချုပ်မော်တော် အစာရှောင်ခြင်း Shutter Built-in မော်တော် အစာရှောင်ခြင်းအလိုအလျှောက်စက်မှု Rolling တံခါး အစာရှောင်ခြင်းဇစ်ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်တံခါး ဂိုဒေါင်လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားမှုတံခါး အစာရှောင်ခြင်းအရှိန်မြန်နှုန်း stacking တံခါး အစာရှောင်ခြင်းလူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါး